ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးမြို့ပြကျန်းမာရေးဆေးခန်းလူနာနမူနာများမှလူပေါင်းစုံလိင်ဆက်ဆံခြင်း (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
J ကိုမြို့ပြကျန်းမာရေး။ 2012 Feb;89(1):129-37. doi: 10.1007/s11524-011-9630-1.
Rothman EF, နှစ်ထပ် MR, Miller က E ကို, ရိဒ် E ကို, raj တစ်ဦးက, Silverman JG.
ရပ်ရွာကျန်းမာရေးသိပ္ပံ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, 801 မက်ဆာချူးဆက် Ave, 3rd ညီထပ်, ဘော်စတွန်, MA 02118, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဒီရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး Cross-Section လေ့လာမှု၏ရည်မှန်းချက်ပျံ့နှံ့, ဆက်စပ်မှုများနှင့်တစ်နမူနာတို့တွင်အမျိုးစုံ-လူတစ်လိင်၏အခြေအနေတွင်ဖော်ပြရန်ခဲ့သည် အပျိုပေါက် မြို့ပြဆေးခန်းတစ်ခုမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှာဖွေနေသည့်အမျိုးသမီးများ။ လူအများအပြားပါဝင်သောလိင်ကိစ္စသည်သဘောအရ (ဆိုလိုသည်မှာ“ သုံးလမ်း” သို့မဟုတ်“ အုပ်စုလိုက်လိင်”) သို့မဟုတ်အတင်းအဓမ္မ (ဆိုလိုသည်မှာ“ ဂိုဏ်းမုဒိမ်းမှု”) ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းကိုအကျုံး ၀ င်ရန်“ လူပေါင်းစုံလိင်” (MPS) ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အတွေ့အကြုံများ။ ဘာသာရပ်များ 32 ရှိကြ၏အသက် ၈ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အတွင်းရှိအမျိုးသမီး ၈ ဦး၊ သူတစ်ဦးဘော်စတွန်-ဧရိယာ community- သို့မဟုတ်ကျောင်း-based အသုံးပြုသွားမည် ဧပြီလနှင့် 2006 ၏ဒီဇင်ဘာလအကြားကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့်ကွန်ပျူတာ-ကူညီ Self-အင်တာဗျူး software ကိုသုံးပြီးအမည်မသိစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။
ယေဘုယျအား 7.3% အစဉ်အဆက်တစ် MPS သည်အတှေ့အကွုံခဲ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြ. ဤအရာ, 52% အစဉ်အဆက်က MPS အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖိအားပေးခံနေရသိရသည် နှင့် 43% အစဉ်အဆက်ကခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်အတင်းအကြပ်ခံရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လတ်တလော MPS သည်အနည်းဆုံးတဦးတည်းအထီးပါဝင်သူအားဖြင့်ကွန်ဒုံး nonuse 45% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည်။
APR, 3.83 (ကြိုတင်အသက်အရွယ် 95 ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်; အလားအလာလူဦးရေရှက်ကြောက်ဘို့ထိန်းချုပ်ခြင်း, MPS သည်စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (1.56% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI] 9.44-15 ပြုပြင်ပျံ့နှံ့အချိုး [APR] 2.50); 95% CI, 1.04-5.98), အစဉ်အဆက်အနေနဲ့ကာလသား (APR, 2.55 ရောဂါခံရ; 95% CI, 1.08-6.03), ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသားကောင် (APR, 4.43; အကြမ်းဖက်မှုသားကောင် (APR, 95 ချိန်းတွေ့, 1.68% CI, 11.69-4.30) ; 95% CI, 1.83-10.07) နှင့်အတိတ်လ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ထိတွေ့မှု (APR, 4.79; 95% CI, 1.91-11.98)။ ၏ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏အပိုဆောင်းလေ့လာမှု အပျိုပေါက် MPS သည်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါသည်။